Sida loo rinjiyeeyo bushimahaaga ama gadhka ama shaarubaha ugu soo dhaweynayaan | Androidsis
Zoom wuxuu noqday adeegii guud ahaan bulshada aysan ka warqabin kahor 2020, si ay hadda u noqoto adeegga heer sare ah. Intaa ha la dhaho, hadda waxay la timid Istuudiyaha Waxyeelada si loogu soo nooleeyo wicitaanada fiidiyowga ee caajiska leh wajigeena halkaas oo ah bartamaha.
Riwaayad aad u xiiso badan oo la keeno qaar ka mid ah saameynta dhabta ah ee la kordhiyay ilaa maanta shirarka shaqada ama wada hadalka qoyska ama asxaabta.
Cusboonaysiintaani maahan inay tahay wax gaar ah oo aanan waligeen arag, maaddaama shabakadaha kale ee bulshada sida Instagram ama Snapchat ay u heellan yihiin bilow shaandhooyin madadaalo leh si "wajiga" loo mariyo oo waxaan heli karnaa waqti fiican markaan wadaagno sawir ama wicitaan fiidiyoow toos ah.
Zoom wuxuu ku daray Studio Effects inuu ku daro sunnayaasha, timaha wajiga, iyo miiraha midabka bushimaha. Sida laga soo xigtay The Verge, waxaan ka heli karnaa ugubkan wanaagsan laga bilaabo Goobaha fiidiyowga ee fiidiyowyada ee xulashooyinka "Aaggagyadooda iyo Shaandhooyinka".
Tani cusboonaysiinta waxaa ka mid ah goobaha 3 tab ee lagu qeexay baarkooda, shaarubaha iyo gadhka, iyo Midabka Dibnaha. Muhiim maahan in la sharaxo waxa uu mid kastaa sameeyo, markaa waa arrin la isku dayo inta u dhaxeysa 7 xulasho ee tan hore, tan kale ee 7aad ee labaad iyo 10 nooc oo midabka bushimaha ku jira.
Waxyaabaha qosolka badan ayaa ah waxaan leenahay midab midab leh si aan u hagaajino ama u qaabeyno midabka mid kasta oo ka mid ah walxahaas qurxinta ee wejigeenna marka aan galno wicitaan fiidiyoow ah; ha moogaan tan Fogee taxanaha gidaarka sawirada.
Marka laga reebo wixii la yiri, saameyntan waxaa lagu qeexi karaa kal-fadhiyada mustaqbalka oo markaa uma baahnin xitaa inaan iyaga dhaqaajino; Kaalay, waxaan noqon doonnaa farxadda beerta haddii aan siino dhaban yar oo aan qoslayno.
Wax cusub oo ah ka dirista dhinaca serverka si aad u bilowdo inaad la xiriirto qof walba oo ku sugan Zoom.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo rinjiyeeyo bushimaha ama loo qurxiyo wejigaaga Zoom: ugubnimada weyn ee barnaamijka wicitaanka fiidiyaha
Kiniiniyada ugu fiican ee la bixiyo Maalinta Jacaylka